လေးဘီးကားလေး ဒဂုံဆောင်ဆင်ဝင်အောက်မှာ ရပ်လိုက်ပါသည်။ နယ်မှလာသောကျနော်သည် ဒဂုံဆောင် ဘယ်မှာရှိလဲ မသိခဲ့ပါ…လေးဘီးကားသမားအကူအညီနှင့် ရောက်ခဲ့တာပါ။ ထိုစဉ် အစ်ကိုအရွယ် လူငယ်သုံးယောက်က ကျနော့်သေတ္တာ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများကို ၀ိုင်းဝန်းကူချပေးပါသည်။ ပြီးနောက် ကျနော်နေထိုင်ရမည့် အခန်းထိ ပစ္စည်းများကို ကူညီပို့ပေးကြပါသည်။ စီနီယာ ကျောင်းသားများ၏ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုမှုကို ကျနော်သတိရနေဆဲပါ။ ဘူမိဗေဒစိတ်ဓါတ်ဆိုတာ ဒါပါလားလို့ နောင်အချိန်များတွင် ကျနော် သိလာရပါသည်။
ထိုစဉ် ဒဂုံဆောင်အဆောင်မှူးသည် ဘူမိဗေဒဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမျိုးမင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာအခုတော့ အမေရိကားကို ရောက်နေပြီလို့ ဆရာများက ပြောပြပါသည်။ ဆရာနှင့်ကျနော်တို့ Fresher welcome မှာ အမှတ်တရရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံလေးက ရှာမတွေ့တော့ပါ။
အခန်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေစဉ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်၏ မြိုင်နန်းစံပန်းတစ်ပွင့် တီးခတ်သီဆိုနေသံကို ကြားနေရပါသည်။
ဒဂုံဆောင်မှာနေစဉ် ဖိုင်နယ်ဘူမိဗေဒကျောင်းသားများကို အစ်ကိုသဖွယ် အားကိုးခဲ့ကြပါသည်။ အစ်ကိုများကလည်း ကျနော်တို့ အခက်အခဲများကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါသည်။ တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှ မင်္ဂလာဒုံ အသွားအပြန် မိုင်နှစ်ဆယ်လမ်းလျှောက်ခဲ့စဉ်က အစ်ကိုများက ကျနော်တို့ကို လမ်းအထိလိုက်လံပြီး အားပေးခဲ့ကြပါသည်။ ရေ၊ ရေခဲ၊ သံပုရာသီးများကိုလည်း အမောပြေစေရန် ကူညီပေးကြပါသည်။
ဒဂုံဆောင်မှာ တစ်ဖြေးဖြေး နေသားကျလာတော့ ၀ါသနာတူအပေါင်းအသင်းတွေလဲ ရလာပါသည်။ ညဘက်ညဘက်ဆို ကျောင်းသူ အဆောင်များသို့ လှည့်ပတ်ပြီးဂစ်တာတီးလေ့ရှိကြပါသည်။ အမြဲတမ်းလိုလို ၁ နာရီ ၂ နာရီလောက်မှ ပြန်လာလေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုအခါ နံနက်ပိုင်းထမင်းစားချိန် မမှီသလို စာသင်ချိန်တွေလည်း မမှီတော့ပါ။ ထမင်းစားဆောင်သည် ၉း၀၀ နာရီ ပိတ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ အိပ်ရာထတာက ၁၀း၀၀ နာရီမှာ….. ကင်တင်းမှာနေ့တိုင်း နံနက်စာစားနေရသည်။ ကြာလာတော့ ဘတ်ဂျက်ထိလာပါသည်။
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ ထိုင်စဉ်းစားနေကြရပါပြီ……
ညစဉ်ညတိုင်းကလဲ ၀တ္တရားပျက်လို့မဖြစ်ပါ။ သူတို့လေးတွေ စိတ်ကောက်နေလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အားလုံး ဒဂုံဆောင်က အစ်ကိုတွေဆီ အကူအညီတောင်းရပါတော့သည်။
မနက်အိပ်ရာကထချိန်နောက်ကျတော့ ထမင်းငတ်တဲ့နေ့တွေများနေပြီ…. ကူညီပါအုံး…အစ်ကိုရဲ့…..
ဗုဒ္ဓေါ….ခေတ်အဆက်ဆက်က ထမင်းစားဆောင် ၉း၀၀ နာရီပိတ်ခဲ့တာ….
မင်းတို့အလှည့်ကျမှ ၁၀း၀၀ နာရီ ပိတ်ခိုင်းနေတယ်ဖြစ်ပါ့မလား……
ဒါနဲ့ဘဲ ဒဂုံဆောင်အစ်ကိုတွေဖြစ်သော..ကိုစိုးပိုင်၊ ကိုမျိုးနိုင် တို့မှတဆင့် အဆောင်မှူးဆီကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဘာ…..ထမင်းစားဆောင် ၁၀း၀၀ နာရီမှပိတ်ရမယ်….ဟုတ်လား…..
၁၀း၀၀ နာရီဆိုတာ ၄၅ မိနစ်-နှစ်ချိန်ကုန်နေပြီ….ကျောင်းမတက်ကြဘဲနဲ့အိပ်နေကြတုန်းဘဲလား…..
မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်….. Section တွေလဲမတူကြဘူး……
နောက်ရက်များတွင်ထမင်းစားဆောင် ၉း၃၀ မှပိတ်မည်ဟုစာကပ်ထားပါသည်။
ကျနော်တို့ အစ်ကိုတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်။ ၉း၃၀ ပိတ်မည်ဟု စာကပ်ထားသော်လည်း တကယ်တန်း ၁၀း၀၀ နာရီထိ ဆရာဦးမျိုးမင်း ထမင်းစားခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆရာဦးမျိုးမင်းကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါသည်။ ကျနော်တုိ့အားလုံး ပျော်ခဲ့ကြပေမယ့် မပျော်တဲ့သူတွေလဲရှိကြပါသည်။ ထမင်းစားဆောင်မှ ဦးကရင်တို့အဖွဲ့ မပျော်ကြပါ။ ၁၀ နာရီထိ ကျောင်းသားတွေကို ထိုင်စောင့်နေကြရ ရှာပါသည်။
တကယ်တန်းကျောင်းသားအများစုသည် ၈နာရီမှ ၉ နာရီအတွင်းမနက်စာစားပြီးကြပြီ….. ၉ နာရီနောက်ပိုင်းမှစားသော ကျောင်းသားများ အလွန်နည်းပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဝတ္တရားအရ စောင့်နေရရှာသည်။ သူတို့အတွက် ညနေစာ ပြင်ဆင်ရမည့်အချိန်များ နည်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အရင်က အချိန်ပိုရင် ဟိုနားဒီနား လုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်လို့ရပါသည်။ ဤအခွင့်အရေး သူတို့ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ ထိုအချိန်က ကျနော်တို့နားမလည်ခဲ့ပါ။ ကိုယ့်အခွင့်အရေးရတာကို ပီတိဖြစ်နေကြသည်။
ပျော်တဲ့သူတွေထဲမှာ တစ်ယောက်ကျန်ပါသေးသည်။ ထမင်းစားဆောင်ထိပ်မှာ ၀က်အူချောင်းကြော်၊ ကြက်ဥကြော်၊ ကန်းစွန်းရွက်ကြော် ရောင်းနေသော ဒေါ်အေးဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသားများ ဟင်းမကောင်းသောနေ့များတွင် ဒေါ်အေးဆီက အကြော်တွေ ၀ယ်စားလေ့ ရှိကြပါ သည်။
လူများသောကြောင့် ဟင်းကောင်းကောင်း…..မကောင်းကောင်း…ဒေါ်အေး…အကြော်အမြဲဝယ်စားလေ့ရှိပါသည်။ဒေါ်အေးက သူ့အကြော် ရောင်း သောအချိန် တစ်နာရီပိုရသွားသောကြောင့် အရမ်းပျော်နေ ပါသည်။
ကျနော်တို့အရင်ကျောင်းသားတွေ လက်ထက်ကတည်းက ပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ RASU ၀င်းကြီးဟာ ကျနော်တို့လက်ထက်မှာလည်း ပျော်စရာတွေနှင့်ပြည့်နေပါသည်။ ကျောင်းစဖွင့်ပြီဆိုကတည်းက Fresher Welcome တွေကဆက်နေပါသည်။ ဌာနတိုင်း၊ အဆောင်တိုင်းရဲ့ ထုံးစံပါဘဲ……..
အများအားဖြင့် RC မှာလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ အခန်းအနားလုပ်ပြီဆိုလျှင်တီးဝိုင်းတွေကပါစမြဲပါ……ကျနော်တို့လို ဂီတ၀ါသနာအိုးတစ် ယောက်အနေနှင့် အချိုရှာ..သကာတွေ့သလိုပါဘဲ…..
ထိုစဉ်က Play boy, Access, E-machine၊ ကိုလွှမ်းမိုးတို့တီးဝိုင်းတွေ လာတီးလေ့ရှိကြပါသည်။ နောက်ပြီး ဆလိုင်းသွှအောင်၊ ကိုတယ်ရီ၊ ဇော်ဝင်းရှိန်တို့တီးတဲ့ ကျောင်းသားတီးဝိုင်းတွေလဲရှိပါသည်။ ကိုလွှမ်းမိုးတို့ဝိုင်းက ကျောင်းသားတွေအလိုကို အမြဲလိုက်လျောလေ့ ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့တီးဝိုင်းကိုပို၍ ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။ နောက်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ ဆေးတက္ကသိုလ် သူတို့တွေမှာလဲပွဲတွေလုပ်လေ့ရှိပါသည်။
နောက်ပြီး RC ထဲမှာ အားကစားပြိုင်ပွဲများကလည်း တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ဆက်တိုက်လုပ်လေ့ ရှိပါသည်။ သိကြတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့်အဖွဲ့က ကျနော်တို့ဌာနကိုဘဲ အားပေးပါသည်။ ဌာနအသင်းရှုံးချင်ရှုံးမည်.. ကျနော်တို့အားပေးတာဘယ်တော့မှမရှုံးပါ။ အမြဲတမ်းအနိုင်ရပါသည်။ ဌာနအသင်းမရှိသောနေ့များတွင် အဆင်ပြေနေသော ကောင်မလေးအသင်းတွေကို ၀ိုင်းအားပေးမည်။
တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစာအစားရောင်းချပွဲတွေလဲလုပ်လေ့ရှိပါသည်။ ချွေးတပြိုက်ပြိုက်ကျလောက်အောင် စပ်နေသော ရခိုင်မုန့်တီကိုလည်း ပြန်တမ်းတမိပါသည်။ ကာတွန်းပြပွဲ၊ ပန်းချီပြပွဲများလည်း လုပ်လေ့ရှိပါသည်။ စာမေးပွဲနီးလာရင်တော့ Dinner ပွဲတွေထပ်လာပြန်ပါသည်။ RC အပေါ်မှ တီးဝိုင်းကြည့်ရတာ အရမ်းသဘောကျပါသည်။
ကောင်မလေးနှင့် Dinner ပွဲမှာအတူတူထိုင်နေလို့က….
တီးဝိုင်းသံတိတ်သွားသော အချိန်မျိုးတွင် ကျနော်တို့အုပ်စုလိုက်ထပြီး အော်ဟစ်နောက်ပြောင်လေ့ရှိကြပါသည်။ ကျနော်တို့ကြောင့် အဆင် ပြေသွားကြသူရှိသလို နောက်ပြောင်တာလွန်သွားတဲ့အတွက် အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့သူတွေလဲ ရှိကြပါတယ်။ အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းများက ကျနော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးမေတ္တာပို့နေကြပါသည်…….. သာသနာဖျက်တွေ…..
ဒီနေ့စနေနေ့နံက် ၉း၃၀ ကျော်လောက်မှာ ထမင်းစားဆောင်မှာ အားလုံးဆုံကြပါသည်။ ဦးကရင်တို့မိသားစု ကျနော်တို့ကို စိတ်ပျက်လက် ပျက်နှင့် စောင့်နေရှာပါသည်။ ကျနော်တို့တစ်အုပ်စုတည်းသာ ကျန်ပါသည်။
ကျောင်းသားတွေ…. အဘတို့ကိုကူညီတဲ့အနေနှင့် နဲနဲစောလာပေးပါလား….
နောက်နေ့လဲဒီလိုအချိန်တွေပါဘဲ..ကိုယ့်လူနဲစုအတွက် အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ လူအများကို ကျနော်ထည့်မစဉ်းစားမိခဲ့ပါ။ ကျနော်တို့အရမ်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သလို ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
B.ed တို့ Eco တွေမှာရောမရှိဘူးလား……
တစ်ခုတော့ရှိတယ်…..Science Hall မှာစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုရှိတယ်……
အခြားပွဲတွေလဲဘာမှမရှိတော့စနေနေ့စာသင်ချိန်ပြီးတော့…..ကျနော်တို့အားလုံးပျင်းပျင်းနှင့်သိပ္ပံခန်းမဘက်သို့လျှောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ကျောင်းထဲမှာ ဘာပွဲမှမရှိတော့ ကျောင်းသားတော်တော်များများလည်း သိပ္ပံခန်းမဘက်မှာ ရှိနေကြသည်။
ဟုတ်တယ်….ဟုတ်တယ်….One star ….၀မ်းစတား ……
(ထိုအချိန် အသံတုကြယ်တစ်လုံးသည် တီးဝိုင်းများတွင် ကြေငြာသူအဖြစ်၎င်း၊ ၀င်းဦးသီချင်း၊ ညွန့်ဝင်းသီချင်းများကို အသံတုဖြင့် ဖျော်ဖြေ နေသူအဖြစ်၎င်း လူသိများနေပါပြီ)
ငါသိပြီ…ငါသိပြီ…ကျောင်းသားတွေကို ဗေဒင်အလကား လာဟောပေးတာဘဲဖြစ်ရမယ်……
အပြေးတစ်ပိုင်းနှင့်ထွက်သွားသော မွှန်ကြီးကိုကြည့်ပြီး အော်မေးကြပါသည်။
မင်းတို့မလိုက်လာကြနဲ့… ကိုယ်နှင့် Bed က ချိုချိုအကြောင်းဗေဒင်သွားမေးမယ်….
မင်းသိင်္ခနှင့်ငါ နှစ်ယောက်တည်းကပ်ပြီး မေးမလို့……
တစ်ကယ်ဘဲစိတ်ထဲမှာ မင်းသိင်္ခဗေဒင်ဟောပေးမယ်ထင်ပြီး ၀ရုန်းသုန်းကားနှင့် ကျနော်တို့အုပ်စုတစ်ခုလုံး သိပ္ပံခန်းမထဲ ပြေးဝင်လိုက်ကြပါသည်။ သိပ္ပံခန်းမကြီးထဲ ကျောင်းသားများပြည့်နေပါပြီ…..
ဒီနေ့ကျောင်းသားတွေကို ကျနော့်ဘ၀အကြောင်းတွေကို ဟောပြောပါမယ်။ လာရောက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေအားလုံးဟာ ကျနော့်ထက် ပညာအရည်အချင်းမြင့်ကြပါတယ်….. ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကို ကျောင်းသားများ ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးမှ ယုံသင့်မှယုံပါ….လို့ဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်……
ဆရာမင်းသိင်္ခ တော်တော်အပြောကောင်းပါသည်။ သူ့အပြောသည်ကျောင်းသားများအာရုံကို ဖမ်းယူနိုင်ပါသည်။ ရယ်စရာဆိုလည်း ၀ါးခနဲ…. စိတ်ဝင်စားစရာဆိုလဲ တုတ်တုတ်မျှပင်မလှုပ်..သည်အထိ မင်းသိင်္ခအပြောကောင်းပါသည်။
ထိုအချိန်က သူ့ကို ဗေဒင်ဆရာဟူ၍၄င်း..စာရေးဆရာအဖြစ်၎င်း…သိနေကြပါပြီ…….. ကျနော့်ကို ဗေဒင်ဆရာအဖြစ်နှင့် လူတော်တော် များများသိကြပါတယ်…ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်ဗေဒင်ဟောစားနေတာကိုး……..
ကျနော် ငတ်လို့ဗေဒင်ဟောခဲ့တာ……… ၀ါးကနဲကျောင်းသားတွေရယ်ကြပါသည်။
ဒါဟာလည်း မဟာဘုတ်ထူတာလောက်ကို သာမန်လူတစ်ကောက် လေ့လာရင်အလွယ်လေးပါ……..မခက်ခဲပါဘူး…..
ကျနော်ငယ်စဉ်က ခဏခဏ အိမ်ကပြေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ…..
ပိုက်ဆံလက်ထဲမရှိတဲ့ အိမ်ပြေးဘ၀မှာ….. စားရေးသောက်ရေးအရေးကြီးလာပါပြီ……
တစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ ရွှေဧည့်သည်…….. ၁၀ ရက် ၁၅ ရက်ကျတော့ ပြောင်းတော့လို့ သူငယ်ချင်းမိန်းမ ရာဇသံကြောင့်ကျနော့်စားရေး
သောက်ရေးအတွက် စဉ်းစားရပါတော့မယ်….လုပ်စရာအလုပ်ကလဲမရှိ…ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလဲမလုပ်ချင်တဲ့….ကျနော့် ငပျင်းစိတ်ကြောင့် ကျနော်တော်တော်ခေါင်းစားနေရပါပြီ…..တစ်နေ့တစ်နေ့အဲဒီမြို့ကဘုရားမှာ… တနေကုန်..နေနေရင်းဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ဘုရားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြည့်လိုက်တော့ ဘုရားပုံတော်တွေရောင်းတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုင်၊ ဘုရားစာတွေရောင်းတဲ့ တရားစာအုပ်ဆိုင်၊ ဘုရားပန်းဆိုင်၊ ပြီးတော့ ဗေဒင်ဟောခန်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ နိဗ္ဗာန်ကုန်ဆိုင်၊ တရားစာအုပ်ဆိုင်၊ ဘုရားပန်းဆိုင်တွေက ကျနော့်လို လက်ထဲမှာပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူမလုပ်နိုင်ဘူး…… ဒါကြောင့်ကျနော့်မှာ ရွေးစရာတစ်လမ်းဘဲရှိတော့တယ်…ဗေဒင်ဟောဘို့…..
အခန်းတွေကိုဘုရားဂေါပက ကထိန်းထားတယ်… အခန်းငှားဘို့ကလဲ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး…… ဂေါပကလူကြီးနှင့်ညှိရပါတော့မယ်။
“မောင်ရင် ဗေဒင်ဟောမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်အလုပ်မဖြစ်လောက်ဘူးထင်တယ်… မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းဆရာဂိန်တို့……. ဒေါ်ပိန်သေးတို့လည်း အလုပ်သိပ်မဖြစ်လှဘူး….. ငါတို့မြို့ကငယ်လွန်းပါတယ်……” အခန်းခပေးရန်မရှိ၍ ဗေဒင်ဟောခန်းဖွင့်ပြီး တစ်ပတ်ကြာမှယူရန် ညှိနှိုင်းကြတာပါ… ပြောကြဆိုကြညှိနှိုင်းကြရင်း… ကျနော်ဗေဒင်ခန်းဖွင့်ခွင့်ရမည်ဆိုပါက ဘုရားအလှူလည်း နှစ်ဆတိုးစေရမည်ဟု ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘုရားအလှူ နှစ်ဆတိုးပေးမယ် ဆိုတော့ ဘုရားလူကြီးလည်း မျက်လုံးကလည်ကလည်နှင့် သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာလဲ ဝေခွဲမရနိုင်တဲ့ပုံပါဘဲ…….ဒါပေမယ့် ဗေဒင်ခန်းဖွင့်ခွင့်ရပြီဆိုတော့ ကျနော်ဗေဒင်ခန်းအတွက် ပြင်ဆင်ရပါတော့မည်။ အများအားဖြင့် ဗေဒင်ပညာကို အဖိုးမှသားသမီး၊ သားသမီးမှမြေးအထိ ဆက်ခံလေ့ရှိကြသည်။ ဘုရားပရ၀ုဏ်မှာရှိတဲ့ ဗေဒင်ခန်းကိုလေ့လာကြည့်တော့…
သူတို့အားလုံးဟာဒီမြို့လေးရဲ့ဇာတိ……ဗေဒင်ဆရာကြီးဦးစ်ိန်ရဲ့ သားသမီးမြေးတွေဆိုတာ တမြို့လုံးအသိ…….
တချို့ကျတော့လဲ ရွာနားကမြက် ရွာနွားမစားဆိုသလို…… မမေးချင်တာလဲပါတယ်…အထင်မကြီးတာလဲပါတယ်….
ဒါပေမယ့်အဓိက…က သူတို့ရဲ့ ယတြာရိုက်ချက် နဲနဲပြင်းတော့ မြို့ကလူတွေနဲနဲလန့်နေကြသည်။
ပထမ….လူတွေ ကျနော့်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်ပြီး သိကြားလဲမဟုတ်… သကြားတဲ့….
ဘာလဲ ဘုရားသာသနာ… အမျိုးမျိုးတွေးတောနေကြပါတယ်။
ကျနော့်အတွေးနှင့်ကျနော်ရေးထားတာပါ….. ဘုရားအလှူ နှစ်ဆ တိုးပေးမယ်လို့ ဂေါပကလူကြီးကိုကတိပေးခဲ့တော့….ဘုရားသာသနာ တိုးတက်စေရမယ်လို့ ရေးလိုက်တာပါ……အပြိုင်အဆိုင်မရှိတဲ့ လောကကြီးဟာ အလွန်မှပျင်းစရာကောင်းပါတယ်….
ဆရာဂိန်တို့၊ ဒေါ်ပိန်သေးတို့ ဗေဒင်ခန်းလာဖွင့်တဲ့အချိန်က ၇း၃၀ နာရီ၊ ၈း၀၀ နာရီလောက်မှလာဖွင့်ကြတာ….
တစ်ခါတစ်လေ ဗေဒင်မေးမည့်သူက သူတို့ကိုစောင့်နေရပါတယ်..
သူတို့လဲသိတယ်လေ… ဒီမြို့မှာ ဗေဒင်ဆရာ…သူတို့အပြင်အခြားမရှိ……
ကျနော်က ဗေဒင်ခန်းမှာဘဲ အိပ်တာဆိုတော့ အိပ်ရာနိုးတာနှင့်စဖွင့်နေပြီ…..
၅း၃၀၊ ၆း၀၀ နာရီလောက်မှာ လဲဖွင့်နေပြီ……
ကျနော် ၆ နာရီလောက်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့ ဆရာဂိန်တို့ ဒေါ်ပိန်သေးတို့လည်း ၆ နာရီလာဖွင့်ပါတယ်……
တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နှင့် ဘာသံမှမကြားလို့ ဘေးဘီကို ချောင်းကြည့်လိုက်တာ…
ဆရာဂိန်က စားပွဲပေါ်မှာမှောက်လျှက်သား….. ဒေါ်ပိန်သေးက ရွှေမှန်ဘီလူးကို ဖက်လျှက်သား….အိပ်ပျော်နေကြတာ…
ဗေဒင်ပညာဟာ သောကအပူတွေများနေတဲ့ ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကို သက်သာစေတဲ့ မေတ္တာကို အခြေခံထားတဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုပါ…..
ကျနော်ဆိုလိုတာက သောကရောက်နေသူတစ်ယောက် ဗေဒင်လာမေးမယ်…
ကျနော်တွက်ချက်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ယတြာတစ်ခု လုပ်ပေးလိုက်မယ်…
ဒီမြို့လေးမှာ ကျနော်ဗေဒင်ဟောခဲ့တာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး….ပျော်ပျော်ပါးပါးလို့ဘဲပြောရပါမယ်…..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော့်ဆီ ဗေဒင်လာမေးရင် တွက်ချက်ပြီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးယတြာမျိုးကို ချေခိုင်းလို့ပါဘဲ….
ကျနော့်ဗေဒင်ခန်းဖွင့်မှဘဲ ဘုရားပရ၀ုဏ်အတွင်းမှ ဆိုင်တွေ ရောင်းကောင်းလာသလို ဘုရားအလှူငွေလဲတိုးလာပါတယ်….
နောက်ပြီး လူပိုစိတ်ဝင်စားအောင် သကြားနှင့်ဖျော်ထားတဲ့ ဇီးဖျော်ရည်တစ်ငုံစာကို ဗေဒင်မေးတဲ့သူတိုင်းကို တိုက်ပါတယ်…
သကြားချိုချိုအေးအေးလေးက… ရင်ကိုအေးမြစေပါတယ်…. အဲဒါကိုသကြားယတြာလို့ခေါ်တာ…
ကျနော့်ဆီ ဗေဒင်မေးပြီးပြီဆိုရင် အားလုံးဟာ စိတ်အေးလက်အေး ပေါ့ပါးပြီးပြန်သွားလေ့ရှိကြပါတယ်..
ဘေးက ဆရာဂိန်တို့မောင်နှမက လက်မှိုင်ချနေပါတယ်…….
အရင်တစ်ခါမှ ဗေဒင်လာမမေးဖူးတဲ့ ပျိုပျိုရွယ်ရွယ် ခလေးမှအစ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးတွေအဆုံး…
ကဲ…ကဲ…ကျနော် စကားလည်းရှည်နေပြီ…ကျောင်းသားတွေလည်း ပျင်းနေရော့မယ်..
ကျနော်အနှစ်ချုပ်ပြောပါရစေ…. အလုပ်လုပ်ရင်း အခက်အခဲကြုံတိုင်း ဗေဒင်မေးပြီး ယတြာချေဘို့ချည်းဘဲ မစဉ်းစားကြပါနှင့်လို့ ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်… ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ဘယ်မှာအားနည်းချက်ရှိနေလဲ ဘာကြောင့်မအောင်မြင်ဖြစ်တယ်…ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် တွေးတော ဝေခွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်….. ယတြာကောင်းလို့ အလုပ်အားလုံး အောင်မြင်မယ်ဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာအားလုံး သူဌေးတွေဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်……
နောက်တစ်ချက်ကျန်ပါသေးတယ်…… ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကံ..ကံ၏အကျိုးလို့ဆိုထားပါတယ်…
ယတြာ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း… ကျနော်တို့ရဲ့ အတိတ်ကံကိုလဲ မေ့မထားကြပါနှင့်လို့….ကျနော်ပြောချင်ပါတယ်…..
(၁၉၈၀-၈၁ နှစ်များအတွင်း ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်သိပ္ပံခန်းမတွင်…ဆရာမင်းသိင်္ခ… ဟောပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများထဲမှ မှတ်မိသရွေ့ နားလည်သရွေ့ ပြန်လည်တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)
အသက်တွေလည်း နောက်ထပ် နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ကြီးသွားပါပြီ…….. ဆရာမင်းသိင်္ခလည်း နာမည်ကြီးသထက် ကြီးလာနေပါသည်။ လောကီမှာ ကျင်လည်နေသမျှ လူမှုအခက်အခဲ စီးပွားရေးအခက်အခဲများ.. မရိုးနိုင်အောင် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အခက်အခဲတွေကြုံတိုင်း ဗေဒင်မေးဖို့၊ ယတြာချေဖို့ ကျနော့်မှာစိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါ။……..။
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် ဗေဒင်ဟောသူများကို မယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ရိုက်ချက်ပြင်းသောယတြာများကို ကြောက်ပါသည်ဟု ပြောလျှင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မည်….သို့သော် ဗေဒင်ပညာသည် ခက်ခဲနက်နဲသောပညာရပ်ဖြစ်သည်ဟု ကျနော် လက္ခံထားပါသည်။
ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာဗေဒင်နှင့် ကင်းခဲ့ပါသလားလို့ မေးခဲ့ရင် ကျနော်လည်းမကင်းခဲ့ပါ….
ဒါပေမယ့်နာမည်ကြီးနေသော ဗေဒင်ဆရာကြီးများ၊ လက္ခဏာဆရာကြီးများဆီသို့ ကျနော်မရောက်ခဲ့ဘူးပါ…..
ဆရာမင်းသိင်္ခပြောခဲ့သလို ဗေဒက၀ိန်ဆရာဂိန်တို့လိုလူမျိုးနှင့် ကျနော်မတွေ့ချင်ပါ….
ကျနော်အခက်အခဲများကြုံရင် ကူညီပေးနေသောသူတွေရှိကြပါသည်။ မြတ်သူ(ငှက်ပျောသီး) ပဲခူး၊ 1980 batch ဘူမိဗေဒ ဆရာကန်တော့ပွဲ အခမ်းအနားပြီးပြီ… ဆိုရင်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး စုထိုင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဓမ္မာရုံမှာ လ္ဘက်ရည်သောက်ရင်း အကြာကြီး စကားပြောလေ့ရှိကြပါသည်။ ထိုအခါငှက်ပျောသီးက တစ်ယောက်ချင်းကို ဗေဒင်တွက်ပေးပါသည်။ ပြီးတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ယတြာတွေ လုပ်ဖို့ပြောပါသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးယတြာ ဆိုတော့လဲ လုပ်ဖြစ်ကြပါသည်။
နောက်တစ်ယောက်က အရင်က ကျနော့်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် သူက ဆရာမင်းသိင်္ခဆီမှာ ဗေဒင်ပညာ လေ့လာသင်ယူ တတ်မြောက်လာပါသည်။ စီးပွားဖြစ်ဟောစားနေသူတော့မဟုတ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများ အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရင် သူကူညီပြီး တွက်ချက်ပေး ပါသည်။
နောက်တစ်ဦးက အမေတို့၊ အဒေါ်တို့ ကိုးကွယ်နေသော ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ် မြနန္ဒာ ကမ္ဘောဇကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏ(ရှမ်းဘုန်းဘုန်း) ပအို့ဝ်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြီးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးယတြာလေးများ ဖြင့်ကူညီလေ့ရှိပါသည်။
လူ့စိတ်သည် ယတြာလေးလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် စိတ်သက်သာရာ ရှာလေ့ရှိကြပါသည်။ ဤလူ့စိတ်အားနည်းချက်ကို.. ဗေဒက၀ိန်ဆရာဂိန်တို့က အပိုင်ကိုင်ထားလေ့ရှိပါသည်။ ဘူမိဗေဒမှာ ကွင်းဆင်းစဉ်က ကျနော်တို့သည် ပအို့ဝ်ဆရာတော်များနှင့် မကင်းခဲ့ကြပါ။ ကျနော်တို့ ပအို့ဝ်ဆရာတော်များ၏ အကူအညီလဲ ယူခဲ့ဖူးပါသည်။ ကွင်းဆင်းစဉ် ကုံလုံဆရာတော်ကြီးဆီကိုလည်း ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ မော်လမြိုင်မှာနေစဉ်ကလည်း သာမညဆရာတော်၊ သထုံအလံတစ်ရာဆရာတော်၊ ပအို့ဝ်ဆရာတော်များနှင့် မကင်းခဲ့ကြပါ။ ယနေ့ထိလည်း ပအို့ဝ်ဆရာတော်များ ကျနော်တို့အပေါ်ကူညီနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ သာသနာပြုနေသောပအို့ဝ်ဆရာတော်ကြီးများ၏ အခန်းဏ္ဍကိုလျှော့တွက်၍မရပါ…
ထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက် ပအို့ဝ်ဆရာတော်ကြီးများ တစ်ပါးပြီးတစ်ပါး ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြပါသည်။
ကျနော်သည် ဗေဒင်ကို မယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း ဗေဒင်နှင့်မကင်းခဲ့သူ တစ်ယောက်လို့ဝန်ခံပါသည်…
ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားရမှာက ဆရာမင်းသိင်္ခပြောခဲ့သော စကားများ ဖြစ်ပါသည်။
အခက်အခဲတွေ့တိုင်း ယတြာချည်းဘဲအားမကိုးဘို့ ကိုယ်ကိုတိုင် တွေးတောအဖြေရှာဘို့…..
ယတြာ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း……ကျနော်တို့ရဲ့အတိတ်ကံကို မေ့မထားကြဖို့ ဖြစ်ပါသည်။